XOG DEG DEG AH: Taliska Ciidamada SL oo labo garab u kala jabay & Taliyayaal ka baxay Jiida dagaalka, ka dib markii… – Puntlandtimes
XOG DEG DEG AH: Taliska Ciidamada SL oo labo garab u kala jabay & Taliyayaal ka baxay Jiida dagaalka, ka dib markii…
LAASCAANO(P-TIMES)- Xog deg deg ah oo ay Puntlandtimes.com ka heshay gudaha deegaanka Gambara iyo Taliska ugu sareeya ee ciidamada Somaliland ayaa sheegaya in uu fashil kusoo dhamaaday kulan deg deg ah oo ay xalay yeesheen saraakiisha ugu sareysa taliska ciidamada Somaliland, kaas oo ay uga wada hadlayeen sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen dhinaca Puntland, waxaana meel sare gaaray khilaafka huursanaa ee u dhaxeeyey dhinacyadan.
Taliyaha ugu sareeya ciidamada Somaliland Nuux Taani Ismaaciil ayaa cadeeyey in dagaalkii lagu jabshay ciidamada Somaliland shalay uu ahaa mid qorsheysnaa oo taliyaasha qaarkood uu ku eedeyey in ay qeyb ka ahaayeen, wuxuu ku dhaliilay kuwa ka soo jeeda gobalka Sool, gaar ahaana magaalada Laascaano aysan si wanaagsan u maareyn dagaalkan.
Mr, Taani ayaa sheegay in ay dhacday gurmad la`aan iyo in ay kala amar qaadan waayeen ciidamadu, taasna ay kaliftay in gabi ahaanba laga qabsado talisyadooda, waxaana arrintaas aad uga carooday taliyayaal kaso kala jeeda Burco & Laascaanood.
Taliye sare oo haysta qeybta 6aad ee ciidamada Somaliland, kana soo jeeda magaalada Burco ayaa sheegay in hadaladaas ay yihiin kuwii horeyba tuhunkeeda u qabeen, ayna muujinayso sida looga baxay dagaalkii shalay dhexmaray iyaga iyo ciidamada Puntland.
Col, Mahad Cambaashe oo ah sarkaal ka soo jeeda magaalada Laascaano oo shalay ciidamadiisii ku waayay dagaalkii dhacay iyo gaadiidkiisii dagaalka oo laga qabsaday 8 baabuurta dagaalka ah ayaa si adag ula hadlay Taliye Nuux Taani.
Cambaashe wuxuu aad uga cawday jabka gaaray, wuxuu ku eedeyey Taliye Taani in uusan waxba gurmad ah u dirin ciidamadiisa, uuna kas ugu diray meel uu ku ogaa cudud ciidan oo xoog badan, ka dibna loo diiday wax gurmad ah in lasiiyo, sidaasna looga qabsaday gaadiid fara badan, ayna ka dhinteen askartii ugu badneyd.
Wasiirka gaashaandhiga oo hadalka soo kala dhexgalay ayaa isku dayay in uu xaaladda dajiyo, balse guuldarro kale ayaa sii dhacday markii si toos ah Saraakiisha Burco & Laascaano ka soo jeeda ay cadeeyeen in aysan waxba amar dagaal ah ka qaadaneyn Nuux Taani, oo ay sheegeen in uu difaacayo dano gaar ah oo ay koox leedahay.
Labada Taliye waxay si cad u diideen in ay wax amar ah qaataan, waxayna markiiba cadeeyeen in ay ka baxayaan dagaalkan, taas oo ayba fuliyeen markii ay diideen in ay qeyb ka noqdaan dagaal saaka uu Nuux Taani qorsheeyey in lagu qaado markale dhinaca ciidamada Puntland.
Korneylka kasoo jeeda Beesha Jaamac Siyaad ee kali ku ahaa dagaalka Somaliland garabkeeda ku jiray ayaa ka baxay saaka goobaha dagaalka, wuxuuna gaaray deegaanka Dalyare oo kudhaw magaalada Laascaano.
Dadaal xoog leh oo lagu bixiyey in lagu celiyo Jiidda Tukaraq ayuu gabi ahaanba diiday, wuxuuna sheegay in uu kulan la leeyahay Odayaasha dhaqanka ee beeshiisa ayna ka wada hadlayaan Aayaha magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobalka Sool.
Xogta ay heshay Puntlandtimes.com waxay kaloo cadeynaysaa in ay jiraan Taliyayaal kale oo dhaliilay qaababka dagaalka ay ku wadaan taliska ciidamada Somaliland oo ah in ay weerar subax kasta ah ku qaadayaan ciidamo u diyaarsan sidii ay u naafeyn lahaa, una qabsan lahaayeen gobalka Sool oo dhan, wax khibrad ahna aysan safuufta ciidamada Somaliland uga dhex muuqan.
SI AAD U HESHO FAAHFAAHIN DHEERAAD AH RIIX HALKAAN
Halkan ka daawo ciidankii puntland ee aaga god-qaboobe oo kasoo goostay puntland isunasoo dhiibay ciidanka qaranka Somaliland ee fadhigoodu yahay taleex DAAWASHO WACAN. http://burcoonline.com/articles/73675/Halkan-Ka-DaawoCiidamadii-Ugu-Tirada-Badna-Oo-Kasoo-Goostay-Puntland-Oo-Lagu-Soo-Dhoweeyey-Magaalada-TALEEXTirada-Ciidamada-Soo-Goostay
PUNTLAND FASHILUU MAALINBA MAALINKA KA DAMBEEYSA.
War heedhahaya doofaaradan anakay niyada noo dhisahayaan duufaan hargeysa ka duusha yaa naga qabta macangag Muuse biixi dafkii wuu dhaneeye 300 boqol oo nin ayuu ka qabaa pudlaan waa dhiga cab